सलमानसँग रिसाएकी गर्लफ्रेन्ड ? पोज दिन अस्वीकार गरेपछि भिडियो भाइरल भयो – Jagaran Nepal
काठमाडौ । सोमबार सलमान खानका लागि निकै विशेष दिन थियो । एकातिर उनको आगामी फिल्म अल्टिमेट द फाइनल ट्रुथको ट्रेलर लॉन्च र अर्कोतिर दाजु तथा सह–अभिनेता आयुष शर्माको जन्मदिनको शुभकामना । तर दुई खुसीको अवसरको बावजुद, सलमानका लागि एक क्षण यस्तो थियो जब उनकी प्रेमिका युलिया वन्तुर सलमानवाट टाढा टाढा देखिइन् ।
वास्तवमा, अक्टोबर २५ मा आयुष शर्माको बर्थडे पार्टीमा सलमान र युलिया एउटै कारमा पुगेका थिए । सलमान कारको अगाडि तल ओर्लिए र पापाराजीको लागि पोज दिँदै देखिए, त्यसपछि युलिया कारबाट ओर्लीइन् र सिधै अपार्टमेन्ट तर्फ लागिन् ।
सलमानको अभिव्यक्तिबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ, उनले यो विशेष अवसरमा युलियासँग दुई–चार तस्बिर पनि पापाराजीलाई दिनेछन् । तर, सलमानलाई बेवास्ता गर्दै युलियाको बिदाइले युलियाको असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ ।
भिडियोमा देख्न सकिन्छ कि कसरी युलिया कारबाट ओर्लेर सलमान वा पापाराजीलाई नदेखे जस्तो गर्दै सीधै बाहिर निस्कन्छिन् । युलियालाई हेर्दै सलमानले उनलाई हेरिरहेका छन् । उसले पनि फर्केर हेर्छिन् तर युलियाको व्यवहार फरक हुन्छ । युलियाको त्यस्तो ब्यवहार देखेर सलमानले भन्छन्, के भन्नु र ? जान दिनुहोस् महोदया लाई ।
लौ, सलमानप्रति युलियाको यो व्यवहार उनको असन्तुष्टि हो कि अरु केहि, थाहा छैन । तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि यो गफको विषय बनेको छ । एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘युलिया वन्तुर खुसी थिइनन् र मिडियाको अगाडि सलमानसँग पोज दिएनन् जस्तो देखिन्छ।ु एकजनाले लेखे ‘अपमान कर दी म्याडम वन्तुर ने’। प्रयोगकर्ताहरूले थप समान टिप्पणीहरू गरेका छन्।
आयुष शर्माको बर्थडे पार्टीमा सलमान र युलिया मिल्दो का लो पहिरनमा देखा परेका थिए । सलमानले आयुष शर्मासँग पनि पोज दिएका छन् । फाइनल द फाइनल ट्रुथमा दुवै कलाकार आमनेसामने हुनेछन् । फिल्मको ट्रेलर रिलिज भइसकेको छ र अहिले मानिसहरु भाइजानको फिल्मको प्रतिक्षामा छन् । आयुषको बर्थडे पार्टीमा संगीता बिजलानी लगायत अन्य स्टार पनि पुगेका थिए । आजतकवाट